Al-Shabaab oo Qori & Kitaab Guddoonsiiyey Ugaas Lagu Duubay Degaan Ay Maamulaan - Latest News Updates
Al-Shabaab oo Qori & Kitaab Guddoonsiiyey Ugaas Lagu Duubay Degaan Ay Maamulaan
Degaanka Bisiq cadde oo illaa 60-km u jira degmada Buur hakaba ee gobolka Bay ayna maamulaan Al-Shabaab ayaa waxaa lagu caleemo saaray Ugaas cusub oo la sheegay iney duubatay beesha Eelaay oo ka mid ah beelaha Digil iyo Mirifle.
Ugaas Max’ed Ugaas Suure Ugaas Cabdi Caliyow ayaa xaflada caleemo saarkiisa waxaa soo qaban-qaabiyey Masuuliyiinta Al-Shabaab ee degaanka iyo beesha uu ka soo jeedo Ugaaska la caleemo saaray.
Waxaa ka qeyb galay Munaasabadaas odayaal iyo waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda beelaha dega gobolada Bay iyo Bakool, iyadoo qaarkood oo goobta ka hadlayna ay balan-qaadeen iney Ugaaska cusub siinayaan boqol neef oo geel ah, boqol ari ah iyo boqol Milyan oo shilin Soomaali ah.
Guddoomiyaha Al-Shabaab ugu qaabilsan gobolada Bay iyo Bakool Shiikh Cabdullaahi Macalin Geeddow oo halkaas ka hadlay ayaa u hambalyeeyey ugaaska cusub isagoo ugu baaqay inuu hormuud ka noqdo dagaalka Al-shabaab ay kula jirto ciidamada dowlada iyo kuwa shisheeye ee taageeraya.Shiikh Cabdullaahi Macalin Geeddow ayaa ugu dambeyn guddoonsiiyey Ugaaska cusub kitaabka Quraanka kariimka ah iyo qori Ak-47 ah, isagoo ALLE uga baryey inuu la garab galo xilka culus ee uu qabtay.
Weli ma cadda in Ugaaskan cusub uu yahay mid ay beesha Eelaay isku raacsan tahay iyo in kale.